बाबुराम भट्टराईको ट्वीटरमा पनि राष्ट्रपतिको दशैं टीका फोटो, के भने उनले ? – Pahilo Page
बाबुराम भट्टराईको ट्वीटरमा पनि राष्ट्रपतिको दशैं टीका फोटो, के भने उनले ?
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १९:२८ 2164 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ५ कार्तिक । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको ट्वीटरमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दशैं टीका फोटोले स्थान पाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई टीका लगाइदिएको फोटो पोष्ट गर्दै डा. भट्टराईले कम्युनिष्टहरुलाई व्यंग्य कसेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको फोटो डा. भट्टराईले पनि पोष्ट गरेका हुन् । डा. भट्टराइले भनेका छन्, ‘‘माक्र्स जीवित छँदै उनको नाउँमा गलत हर्कत गर्नेहरुलाई माक्र्सले भनेका थिए- If this is ‘Marxism’,I am no Marxist! अहिले नेपालको ‘कम्युनिष्ट सरकारलाई माक्र्सले हेरिरहेका भए भन्लान्- If this is ‘communism’,I am no communist!
मार्क्स जीवित छँदै उनको नाउँमा गलत हर्कत गर्नेहरूलाई मार्क्सले भनेका थिए-If this is ‘Marxism’,I am no Marxist!अहिले नेपालको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारलाई मार्क्सले हेरिरहेका भए भन्लान्-If this is ‘communism’,I am no communist! pic.twitter.com/8wYd3pSheJ
— Baburam Bhattarai (@brb1954) October 22, 2018